Beesha (Sacad) Oo Rabta Inay Soo Dhiibto Mooryaankii Diley Ganacsade (C/laahi “Meekhaan” Cismaan Axmed) – Codka Qaranka Tanadland
Beesha (Sacad) Oo Rabta Inay Soo Dhiibto Mooryaankii Diley Ganacsade (C/laahi “Meekhaan” Cismaan Axmed)
Maalinka axadda ah oo beri ah waxaa lagu balansanyahay in beelaha reer (Ugaas Cismaan) iyo (Sacad) ay isugu yimaadaan shir muhiim ah. Shirkaas oo ay ujeedadiisu tahay in beesha Sacad ay balan qaadaan, inay beesha reer (Ugaas Cismaan) ay u soo gacangeliyaan ninkii diley (C/laahi “Meekhaan” Cismaan Axmed). Ninka ganacsadaha ah ee beesha reer (Ugaas Cimaan) ayaa ahaa nin magaalada Gaalkacyo caan ka ahaa. Waxaana la diley khamiistii ina dhaaftay isaga oo gaarigiisa ku dhexjira oo suuqa weyn ee magaalada Gaalkacyo taagan. Waxaana tacshiirad ku furay gaarigii uu watey nin mooryaan ah oo beesha Sacad u dhashay. Gaariga uu watey ganacsade (Cabdulaahi “Meekhaan”) ayaa waxaa la saaraa dhowr qof oo kale. Waxaana dhaawac fudud uu gaarey dadkii gaariga la saaraa (Cabdulaahi “Meekhaan”) nin beesha (Mareexaan) ah.
Suuqa weyn ee magaalada Gaalkacyo ganacsiyada iyo dhismeyaasha meheradaha ee ugu badan oo ku yaala waxaa iska leh dadka reer Tanadland. Waxaana jira dhismeyaal iyo baqaaro badan oo ay beesha Sacad ijaar ugu jireen tan iyo intii magaalada Gaalkacyo ay ku soo noqdeen. Arinta dad badani ay la yaabanyihiin waxa weeye kibirka iyo daf-dafta mooryaanta xaafadda baraxley ay la soo bexeen ayaamahakan. Todobaadkaan bilowgiisii ayey ahayd markii ay damceen inay dhistaan dhul ay leedahay beesha reer (Cismaan Yuusuf). Mooryaanta baraxley hada kibirkoodu wuxuu marayaa heer ay damcaan inay dhistaan dhul banaan oo koonfurta xaafadda Garsoor ku yaala, ayna leedahay beesha reer (Ugaas Cimaan). Waxalow dhowaan goobtii ay rabeen inay dhismaha ka sameeyaan laga cayrshey mooryaanta. Dhisme qabyo ah oo ay meesha ka dhiseena laga bur-buriyey. Hadana dugaaga baraxley ku xeraysan waxay ku dhiiradeen inay suuqa weyn bartankiisa ay dad ku weeraraan.
Ninka mooryaanka ah ee diley (C/laahi “Meekhaan”) jifada uu ka dhashay odayaal ka mid ah iyo qaar ka mid ah odayaasha jifooyinka kale ee beesha Sacad, ayaa waxaa laga soo xigtey inay rabaan in si dhaqso ah ninka gacankudhiiglaha ah beesha reer (Ugaas Cimaan) ay ugu soo wareejiyaan. Laakiin beesha reer (Ugaas Cimaan) ayaa waxay aaminsantahay in nin mooryaan ah sooqabashadiisu inaanay wax micno ah aysan samaynayn. Ee loo baahanyahay mooryaanta baraxley in si fiican loo xanuujiyo oo rag badan laga laayo.
Waxaad moodaa in mooryaanta baraxley ay ilaaween dagaaladii sida xun loogu jebiyey ee dhacay intii u dhexaysey 1982 -ka ilaa 1983 -dii, oo dagaalkii ugu danbeeyey saldhigii maleeshiyadooda lagu qabsaday. Iyadoo markaas uu hub u keenay korneelkii Ogaadeen oo hubka ka iibinjirey. Nin kaas oo markii aanu qabanay aanu siideyney. Hadana ka mid ah siyaasiyiinta beesha (Maxamed Subeer) raga ugu cad-cad oo goobjoog ka ahaa maalintaas fadarada baraxley halaagii ku dhacay. Mooryaanta baraxley waa dugaag mana ay istaahilaan in wax wadahadal ah lala galo oo loola dhaqmo sidii binu’aadankii.
Dugaaga uu dugaagudhalay oo nin muxtarim ah oo suuq dhex taagan baaska ku furay, iyo waxa mooryaanta ah oo uu ka dhashayba waa in la eedsiiyaa falka noocaas ah. Waana in si bareero ah loo weeraraa oo si fiican loo laayaa waxa fadarada ah.